Global Voices teny Malagasy » Lahatsary: Ny Andro Fanoherana Ny Herisetra Atao Amin’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Mey 2018 12:40 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika (fr) i Samantha Deman, miora
Sokajy: Amerika Latina, Afganistana, Kolombia, Meksika, Paragoay, Repoblika Dominikana, Zambia, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Zon'olombelona an-tsary
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Desambra 2008)
Fango tapadamba fotsy, an'i marysuephotoeth 
Natao tamin'ny 25 novambra ny andro iraisam-pirenena ho fanafoanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy , daty izay manamarika ihany koa ny fanombohana ny 16 andro fikatrohana hanoherana ny herisetra atao amin'ny vehivavy, hatramin'ny 10 desambra. Ny datin'ny 25 novambra no nofidiana ho fahatsiarovana ny famonoana ireo Mirabal telo mirahavavy, mpikatroka ara-politika niasa tao amin'ny Repoblika dominikàna nandritra ny andian-taona 60 ary novonoina nandritra ny fitondrana jadon'i Trujillo. Ny tahirin-kevitra mitondra ny lohateny hoe Code name: Butterflies  (anarana miafina: lolo) ny mitantara ny tantaran-dry zareo ary afaka mahita ny ‘bande-annonce’ -n'ny sarimihetsika ao anatin'ity horonantsary manaraka  ity ianareo:
Ny tranonkala fifampizaràna lahatsary The Hub, natomboky ny Witness , dia mandray anjara amin'ireo 16 androm-pikatrohana hanoherana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ary manolo-kevitra mba hijerena ny lahatsary ery ambany, notontosain'ny Fikambanana revolisionera an'ireo vehivavy ao Afganistan. Izy io dia mitondra ny lohateny hoe Rise  ary manoritsoritra “ny fiainan'ireo Afgana nanomboka ny fiandohan'ireo hetsiky ny tafika notarihan'i Etazonia.»
Napetraka amin'ny tambajotra ihany koa, eo amin'ny The Hub, nandritra ny herinandro, ireo lahatsary hafa mikasika io lohahevitra io.
Ato amin'ity lahatsary avy any Kolombia ity , ny blaogy Compromiso Medios  [amin'ny fiteny espanola] manadihady an'ireo vehivavy marobe, izay mitantara ny tantaran'izy ireo, rakotra fanararaotana izay nihatra tamin'izy ireo. Resahan'izy ireo ny momba izany hoe voatery mandao ny fonenany sy very entana manokan'ny tena izany, ny tsy maintsy hamoizan'izy ireo ny fianakaviany noho ny herisetra, ny fitantanana ny tokantrano sy miasa anaty fepetra tsy mitovy ary anjakan'ny herisetra ao an-tokantrano. Iray tamin'ireo vehivavy ireo no mitantara ny fomba nisetrasetran'ny sakaizany azy nandritra ny 17 taona sy ny fomba, talohan'ny fankatoavana ireo lalàna manohitra ireo herisetra ao an-tokantrano, tsy nahafahany nametraka fitoriana, satria nila vavolombelona nanaiky hiampanga ny mpanao herisetra tamin'izany fotoana izany. Vantany vao voafidy ireo lalàna vao haingana, afaka nampanan-danja ireo porofo ara-batana izy, toy ireo mangana sy ireo ratra, ary nisaraka tamin'ny sakaizany mba hamelona irery ireo zanany. Amin'ny fiteny espanola ny lahatsary:
Tamin'ny endriny samihafa, nentin'ireo mpandray anjara ny fanohanan-dry zareo an'io finiavana erantany mba hampitsaharana ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Ao Meksikô ohatra, fitsangatsangana iray tamin'ny bisikilety  no nokarakaraina, ny fiantombohan'ny takariva mba hanentanentana ny fanahy, nandritra io andro io:
Ao Paragoay, nifamory ireo vehivavy nandritra ny fiaretan-tory nitondra jiro jabora  ho fanoherana ny rafi-pitsarana paragoaiana izay nanameloka an'i Zully Samudio, tovovavy iray 23 taona mpianatra ho mpitsabo, higadra mandritra ny 7 taona noho ny famonoana ny voalaza ho mpanolana iray, tamin'ny taona 2007 ary tao an-tranony. Io fanamelohana io dia natao noho ny tsy nahavitàna nanaporofo ny fisian'ny fanolanana tontosa ary raha toa ilay fitaovam-piadiana ka an'ny mpanolana na an'ny niharam-boina .
Na izany aza, ankehitriny, efa navotsotra izy ary afaka nampakatra fitsaràna ambony sy miseho malalaka mandritra ny fitsaràna. Nandritra ny tafa  iray [amin'ny fiteny espanola] nekeny taorian'ny famotsorana azy, nanambara tamin'alahelo izy fa ho tsaratsara kokoa ho an'ireo vehivavy raha voaolana, satria ireo 14 volana nandalovany tao ampigadrana nandritra ny zotram-pitsaràna, dia tena zava-doza mihoatra lavitra noho ny fanolanana. Nanambara ihany koa izy fa noheveriny ho faharesena mialoha ilay fitsaràna: zanakalahin'ny lehiben'ny mpitandro filaminana ilay maty ary lazain'ny lona fa efa fantatra alohan'ny fitsaràna ny ho vokany, efa talohan'ny nanaovana ny fanadihadiana ilay raharaha aza.
Daty iray manandanja mandritra io vanim-potoana io ny Andro manerantany mikasika ny sida. Ao anatin'ny lahatsary eo ambany , hazavain'i Mariama Banda izay ao anatin'ny hetsika Women Won't Wait (Tsy Hiandry Ireo Vehivavy) ao Zambia, ireo fifandraisana misy amin'ny herisetra atao an'ireo vehivavy sy ny sida.
Mba ho fanampim-panazavana mikasika ny Andro manerantany hanoherana ny sida , namorona pejy fandrakofana iray manokana  [amin'ny fiteny anglisy] izahay ahitàna ireo lahatsoratra mikasika ilay olana ary sarintany iray ihany koa, ahafahana mametraka ireo blaogera erantany izay manoratra momba ny dikan'ny fiainana miaraka amin'ny VIH/SIDA.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/24/119859/
 tapadamba fotsy, an'i marysuephotoeth: http://www.flickr.com/photos/marysuephotoeth/3059175266/
 ny andro iraisam-pirenena ho fanafoanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy: http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/violence/index.html
 Code name: Butterflies: http://www.codenamebutterflies.org/
 horonantsary manaraka: http://www.youtube.com/watch?v=FScbTlZf4Jo
 Ato amin'ity lahatsary avy any Kolombia ity: http://www.youtube.com/watch?v=zwpkwRgNZCE
 Compromiso Medios: http://www.compromiso-medios.de/
 fitsangatsangana iray tamin'ny bisikilety: http://www.youtube.com/watch?v=lj7lJYepMZc
 ny fiaretan-tory nitondra jiro jabora: http://www.youtube.com/watch?v=Fl7ZKr2CTGk
 lahatsary eo ambany: http://www.youtube.com/watch?v=GQZudk2JSok
 ny Andro manerantany hanoherana ny sida: http://www.un.org/french/events/aids/
 pejy fandrakofana iray manokana: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/world-aids-day-2008/